China Odor Remover Mugadziri uye Mutengesi | BGT
Kunhuwa Remover inzira nyowani ye deodorant iyo inogona kubvisa zvachose uye kunhuhwirira kwe CO2, SO2, nitrogen oxide chiutsi gasi (NOX), ammonia (NH3) nezvimwe.
Inogona kushandiswa muPP, PE, PVC, ABS, PS, Paint uye Rubber zvinhu.
Kunhuwa Removerimhando yezvinhu zvinonhuwirira nenzira yekutora uye kugadzirisa uye zvakare ine yakapararira yakanaka. Zvichienzaniswa nedzimwe nzira dzekunhuhwirira, zvinogona kubvisa zvachose hwema hwependi nePP, PE, PVC, ABS, PS plastiki, rabha, pane kushandisa zvimwe zvinonhuwira kuvhara.
Iine simba rakasimba reCO2, SO2, nitrogen oxide chiutsi gasi (NOX), ammonia (NH3) mabhodhoro emushonga, mabhodhoro ekuzora, mabhodhoro ezvinwiwa, makemikari zvinowedzerwa, zvisaririra zvinonhuwira, asi hwema hwepakutanga hwepurasitiki, rabha, pendi, ingi, pendi hazvichinje.
Mhando dzese dzinotevera hadzina hwema neisina-chepfu uye isinga-kukurudzira iyo yakapfuura SGS Certification.
Kutevera ndiko kutsanangurwa kwakadzama kwerudzi rumwe nerumwe:
Yakagadzirwa nechicherwa chinhu nenzira huru yekumwa. Iyo irwo rudzi rweyakajairwa kushandiswa zvakajairika mupurasitiki ine hwema hushoma.
PP, Pe, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, Eva, shangu zvinhu, rabha, pendi, ingi, pendi etc.
0.1% - 0.3% yepurasitiki, 0.8% -1% yerabha zvinhu.
Iine basa rakafanana neBT-100A, asi muyero wacho ishoma.
0.05% - 0.1% yepurasitiki
Iine basa rakafanana neBT-100A yekubvisa hwema hwakasimba.
Izvo zvakare zviri nani kune nyoro PVC kunyorera.
0.1% - 0.2%, kazhinji inongowedzera 0.1% isu zvakakwana.
Iyo inotora yakakwira tekinoroji yemidzi meridian kuburitsa ine nani nzira yekuora.
Zviri nani kushandiswa muPP, PE uye yakapfava PVC.
Izvo zvinowanzoitirwa kupupa furo yekudzokorora mapurasitiki.
Inogona kushandiswa mukuputika kwePP, PE, PVC, PS, ABS, EVA uye rubber.
Inonyanya kushandiswa kugadzira shangu.
Inogona kushandiswa muPP, PVC, PS, ABS uye PC nezvimwewo.
Inowanzo shandiswa mune yerabha zvinhu.
PP, Pe, PVC, PS, PA, ABS uye shangu zvinhu.
Inogona kubvisa kunhuhwirira kunobva mupurasitiki nekuzadza kweFrench chena uye calcium carbonate.
PP, Pe, PVC, ABS, PS uye rabha.
Rinonhuhwira rinobvisa poda fomu uye 15KG dzakazara mune imwe katoni ine aluminium kurongedza mukati. Inofanirwa kuchengetwa munzvimbo yakachena, ine mweya, yakaoma uye inochengeterwa mwedzi gumi nemaviri.
1.Vatengi vanofanirwa kusarudza mhando maererano nehukuru hwehukuru hwezvinhu.
2.Tinogona kubvisa imwe hwema isingatauri mune ino katarogu, kana iwe usingakwanise kutonga kuti chii chinonhuwira, iwe unongotumira imwe sampuro diki kwatiri, tinogona kuita kuyedza murabhoritari yedu uye kukubatsira iwe kuita sarudzo iyo inogona kushandiswa.
Sezvo iko kunhuhwirira kwemakemikari kuri kunetsa kutonga kwazvinobva, saka tinokumbira nemutsa kutumira sampuli kwatiri kuitira bvunzo bvunzo, kuti tigone kuita mhando chaiyo yako kunyorera.
Pashure: Kujekesa Mumiriri BT-9803
Zvadaro: Optical Brightener Ob-1
Isiri-Stimulation Odor Remover
Isiri-Inotyisa Odor Remover
Kunhuwa Remover KwePurasitiki
Kunhuwa Remover Ye PE
Kunhuwa Remover Ye PP
Hunhu Remover Of PVC
Hunhu Remover Of Rubber